Ny Tontolon’ny Bilaogy Libaney Tamin’ity Herinandro Ity: Mama, Dada sy Andriamanitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2017 12:58 GMT
Na dia mitohy aza ny fifandirana ao amin'ny Fihaonambem-pirenena, nanohy momba ireo zavatra maro samihafa tafiditra amin'izany tontolon'ny bilaogy Libaney miteny Anglisy. Ur Shalim nanamarika ny fitoviana misy eo amin'ny ady an-trano Libaney sy Irakiana, Across The Bay and Beirut To The Beltway indray niditra tamin'ny antsipiriany isan-karazany.
Amin'ity herinandro ity anefa, avelantsika hiala sasatra ny politika; Misaotra an'i Eve ao amin'ny Mysterious Eve, handika ireo sombiny sasany avy amin'ny teny Arabo ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Libaney aho, izay matetika mitatitra zavatra avy amin'ny tenany kokoa tsy tahaka ny namany amin'ny teny Anglisy.
Eve, amin'ny fombany tia maminavina sy poetika, mieritreritra zava-misy iray izay manendry ny anjaran'ireo zaza vao teraka eto amin'izao tontolo izao i Andriamanitra sy ny anjely.
Bilaogera hafa sahirana nanoratra mikasika ny ray aman-dreniny. Sasmen nanoratra tononkalo mampihetsi-po ho an'ny reniny amin'ny Fetin'ny Reny, izay ankalazaina ny 21 martsa any Libanona.
Hilal avy ao amin'ny Nostalgia namoaka lahatsoratra momba ny raim-pianakaviana iray tsy afaka mamela ny zanany vavy, mba hanome aingam-panahy fotsiny an'i Rat mba hanoratana taratasy ho an'ny rainy izay maty tamin'ny herintaona. Indrisy fa mahazatra indrindra eo amin'izao tontolo izao ny zava-iainan'i Rat. Ity misy sombintsombiny: